အရမျးလှမျးတယျ ဒါပမေယျ့ ဘယျတော့မှ မပတျသကျတော့ဘူး …. – One Daily Media
သိပျခဈြခဲ့တာပေါ့ မဟုတျပဲ ခုခြိနျထိကို ခဈြနမေိသေးတာ … သူပွုံးနတောလေးကအစ သူ ပဈထားခဲ့ဖူးတာအဆုံး တဈဈိုကျမတျမတျကိုခဈြခဲ့ဖူးတဲ့ ကောငျမလေးပဲလေ … ခုလဲ အဝေးကွီးကနေ ဆကျပွီး ခဈြနမေိဦးမှာပါပဲ … ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီခဈြပါတယျဆိုတဲ့ အနောကျမှာ ဘယျတော့မှ ဆုံနိုငျအောငျ ကွိုးစားတော့မှာမဟုတျဘူး ဘယျတော့မှ မဆကျသှယျမိအောငျပဲ ကွိုးစားနမေိတော့မှာပါ …
သတိရတယျ … မပွောဖွဈတော့ဘူး …. ဘယျလောကျလှမျးနပေါတယျဆိုပွီး ကွားအောငျပဲဖွဈဖွဈ မွငျအောငျပဲဖွဈဖွဈ ဘယျတော့မှ လုပျနတေော့မှာမဟုတျဘူး သူ့အမွငျမှာ ကိုယျတဈယောကျတညျးလဲ အဆငျပွနေတောပဲ ဆိုတဲ့အသိ ဝငျလာတဲ့အထိကို သနျမာပွထားတာပါ … ဘယျတော့မှ သူရှမှေ့ာ အရငျလို ငိုပွနတေော့မှာ မဟုတျဘူး …
ခဈြပမေယျ့ ပေါငျးစပျလို့မရတဲ့ဘဝတှေ တကယျရှိပါလားဆိုတာ ကိုယျတှကွေုံ့မှပဲ ယုံလာရတယျ … အရငျကဆို သိပျစိတျကူးယဉျဆနျတာ အခဈြသာ ရှိရငျ လူနှဈယောကျ ပေါငျးစပျဖို့ လုံလောကျပွီဆိုပွီး လှယျလှယျလေးပဲ တှေးခဲ့မိတာ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝတှမှောတော့ အခွအေနတှေေ မတူရငျတောငျ စိတျဓာတျတှေ တူဖို့လိုသေးတယျ .. စရိုကျ … ပွီးတော့ လမျးတှပေေါ့ …
မတူတဲ့အရာတှကေို ညှိယူလို့ရမယျလို့ထငျခဲ့တာ တကယျတမျးကတြော့ မလှယျကူလှဘူး နားလညျပေးရငျတောငျ အမွဲတမျးနားလညျပေးနရေတဲ့ကိုယျ့မှာ ပငျပနျးတယျ နရောတကာ အလြော့ပေးနရေတဲ့ ကိုယျဟာတဖွေးဖွေး အဖိုးမတနျတော့သလို သိမျငယျလာရတယျ တကယျသာခဈြရငျ နားလညျပေးရမှာပေါ့တဲ့ သျိပျခဈြတာပေါ့ အခဈြတှတေော့ အရငျလိုပဲ နညျးနညျးလေးမှ မလြှော့ခဲ့ဘူး
ဒါပမေယျ့လေ… သူ့အနားမှာ နရေတာ ကြှနျမ မပြျောတော့ဘူး ပွီးတော့ မတူညီတာတှအေမြားရှိတဲ့ ဘဝနှဈခုဟာ တကယျလကျတှတှေ့မှော ပေါငျးစပျဖို့ ဘယျလိုမှ မလှယျကူဘူးလေ … အဝေးကနပေဲ ဆကျခဈြဖို့ကိုပဲ ရှေးပါတယျ ….
လှမျးတယျ … မပွောပွဖွဈတော့ဘူး …. သတိရတယျ … ဘယျတော့မှ မပတျသကျတော့ဘူး … သိပျခဈြတယျ ဒါပမေယျ့ ဘယျတော့မှ မဆကျသှယျတော့ဘူး … ပွနျမလိုခငျြတာကလှဲရငျ အခဈြတှကေတော့ အရငျလိုပါပဲ ။
အရမ်းလွမ်းတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မပတ်သက်တော့ဘူး ….
သိပ်ချစ်ခဲ့တာပေါ့ မဟုတ်ပဲ ခုချိန်ထိကို ချစ်နေမိသေးတာ … သူပြုံးနေတာလေးကအစ သူ ပစ်ထားခဲ့ဖူးတာအဆုံး တစ်စိုက်မတ်မတ်ကိုချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်မလေးပဲလေ … ခုလဲ အဝေးကြီးကနေ ဆက်ပြီး ချစ်နေမိဦးမှာပါပဲ … ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အနောက်မှာ ဘယ်တော့မှ ဆုံနိုင်အောင် ကြိုးစားတော့မှာမဟုတ်ဘူး ဘယ်တော့မှ မဆက်သွယ်မိအောင်ပဲ ကြိုးစားနေမိတော့မှာပါ …
သတိရတယ် … မပြောဖြစ်တော့ဘူး …. ဘယ်လောက်လွမ်းနေပါတယ်ဆိုပြီး ကြားအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြင်အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်တော့မှ လုပ်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူး သူ့အမြင်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလဲ အဆင်ပြေနေတာပဲ ဆိုတဲ့အသိ ၀င်လာတဲ့အထိကို သန်မာပြထားတာပါ … ဘယ်တော့မှ သူရှေ့မှာ အရင်လို ငိုပြနေတော့မှာ မဟုတ်ဘူး …
ချစ်ပေမယ့် ပေါင်းစပ်လို့မရတဲ့ဘ၀တွေ တကယ်ရှိပါလားဆိုတာ ကိုယ်တွေ့ကြုံမှပဲ ယုံလာရတယ် … အရင်ကဆို သိပ်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာ အချစ်သာ ရှိရင် လူနှစ်ယောက် ပေါင်းစပ်ဖို့ လုံလောက်ပြီဆိုပြီး လွယ်လွယ်လေးပဲ တွေးခဲ့မိတာ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀တွေမှာတော့ အခြေအနေတွေ မတူရင်တောင် စိတ်ဓာတ်တွေ တူဖို့လိုသေးတယ် .. စရိုက် … ပြီးတော့ လမ်းတွေပေါ့ …
မတူတဲ့အရာတွေကို ညှိယူလို့ရမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ တကယ်တမ်းကျတော့ မလွယ်ကူလှဘူး နားလည်ပေးရင်တောင် အမြဲတမ်းနားလည်ပေးနေရတဲ့ကိုယ့်မှာ ပင်ပန်းတယ် နေရာတကာ အလျော့ပေးနေရတဲ့ ကိုယ်ဟာတဖြေးဖြေး အဖိုးမတန်တော့သလို သိမ်ငယ်လာရတယ် တကယ်သာချစ်ရင် နားလည်ပေးရမှာပေါ့တဲ့ သ်ိပ်ချစ်တာပေါ့ အချစ်တွေတော့ အရင်လိုပဲ နည်းနည်းလေးမှ မလျှော့ခဲ့ဘူး
ဒါပေမယ့်လေ… သူ့အနားမှာ နေရတာ ကျွန်မ မပျော်တော့ဘူး ပြီးတော့ မတူညီတာတွေအများရှိတဲ့ ဘ၀နှစ်ခုဟာ တကယ်လက်တွေ့တွေမှာ ပေါင်းစပ်ဖို့ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ကူဘူးလေ … အဝေးကနေပဲ ဆက်ချစ်ဖို့ကိုပဲ ရွေးပါတယ် ….
လွမ်းတယ် … မပြောပြဖြစ်တော့ဘူး …. သတိရတယ် … ဘယ်တော့မှ မပတ်သက်တော့ဘူး … သိပ်ချစ်တယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မဆက်သွယ်တော့ဘူး … ပြန်မလိုချင်တာကလွဲရင် အချစ်တွေကတော့ အရင်လိုပါပဲ ။